Sei ndakaroorana Naizvozvo Young: From My Wife's Perspective — Trip LEE
Sei ndakaroorana Naizvozvo Young: Kubva Wife vangu Perspective
About mwedzi apfuura ndakanyora Blog kutaurira vabereki nei ndakaroorana muduku. Ndakabayiwa mwoyo akakurudzirwa nokuda mhinduro kubva zvose vanoriverenga uye munyengetero wangu kwave kuti dai Jehovha kutibatsira kufunga rutsigiro nezvomuchato. Kana hamuna kuwana kuverenga kuti yepakutanga romukova tarisa nazvo pano: Nei ini Nemba Naizvozvo Young?
Zvakanaka pashure vazhinji saka vabereki ruoko kwandiri uye akandiudza kuti anobatsira zvakanga kwavari, Ndakafunga kuti zvaizova sezvaakanga zvinobatsira kuti mukadzi wangu, Jessica, tipindure mubvunzo iwoyo pamaonero ake. Saka pano ndiwo. Chii chakaita mudzimai wangu kusarudza kuroora saka muduku? Anoti…
1. Ndakawana murume aitya Mwari
Pandakatanga vakasangana Trip, Handina kuronga kuroorwa chero nguva pfupi. Asi kubva pakutanga chaipo nguva isu vakabuda, Ndakaziva paiva chinhu chakasiyana nezvake. Iye waiva wakazadzwa nezveEvhangeri nenzira yandakanga ndisati ndamboona pane mukomana wezera rangu. Neniwo kumboonana mumwe akachenjera kudaro maonero kufambidzana. Pamusana mudzidzi wake asati kukoreji aiziva chaizvo akafunga ukama okuzvipira anofanira kutarisa akafanana uye akanga asingadi kuwirirana kuti.
Ndinobvuma kuti pakutanga ini mutsimba ichi. Zvaiita zvakakomba zvakare uye nokunyanyisa. Asi nokufamba kwenguva Jehovha wakatanga undiitire uchenjeri muukama nomuti vemunharaunda, zvepabonde UYE mupfungwa kuchena, uye kudanana nokuti chinangwa chokuroorana. Kana hausati wagadzirira kuroora, ipapo kwayo zvimwe kwete pfungwa yakanaka wokuita chimwe nechimwe vamwe mwoyo. In Song of Solomon tinonyeverwa kwete kumutsa rudo asati nguva yaro. sezvo vakadzi, tiri chaizvo mupfungwa vanhu saka kana ndakasangana murume waiva wakazadzwa pamusoro pakuitisa ukama hwedu nenzira airinda mwoyo wangu, Ndaiziva Ndakawana muchengeti :)
2. Taikurudzirwa vanhu hwedu
Panguva yataidanana takakumbira vamwe vanhu kuti kunofambidzana kuitawo ukama hwedu. Vangadai kuchengeta tizvidavirire nemiganhu edu uye kutibatsira kusarudza nokuchenjera nezvoukama hwedu. Isuwo vakayambuka musati mazano tisati kunyange kuroorana. Zvinhu izvi zviviri akabvumira kuti titsvake uchenjeri vakura, hama akachenjera nehanzvadzi pamusoro here kana kuti kwete kuti yaiva pfungwa yakanaka kuzoroorwa. Mwari akatipa vafudzi zvevapi vamazano kuchechi yedu kuti chikonzero. Ivo kutibatsira kufunga kuburikidza zvatinosarudza nouchenjeri uye ape kuzvipira kunze maonero. Relationships kuti zvinoitiswa voga vari kuisa vakaroorana pana zvakakomba mukana chivi uye kuchenjera zvisarudzo. Ndingadai chaizvoizvo kukurudzira kufambidzana vakaroorana kuti vamwe vatendi kubva munharaunda yako kunofambidzana pakuita ukama hwavo.
3. Ishe akandiratidza kunaka muchato
Somunhu freshman kukoreji ndaiva chii ndinofarira kudana Unofanira Kuva Nyanzvi Chaiyo Syndrome. Ndakanga akazvimirira chaizvo uye basa inodzingwa, vanopikiswa chaizvo pfungwa inoda murume. Handifungi pane chakaipa kuva akazvimirira kana basa kutinhwa, asi mumwoyo mangu zvakanga kupfuura kuti. Ndakanga achizvidza magadzirirwo varume nevakadzi naMwari. Ndingadai kumbotaura kuti zvinonzwika, asi kana ndakanga akatendeseka, Ndakanga kunetseka nezvinhu zvandaifunga Bhaibheri aifanira kutaura pamusoro vakadzi. Tiri kusimba, hatigoni dzidzisa, hatigoni kutungamirira, hatizi musoro wemba, uye chaizvo kufarira kwangu, tiri kuva mweya munyoro wakanyarara. Ndakafunga ndaiva nechinhu asi mweya munyoro wakanyarara uye ndakanga ndisingafariri kuchinja unhu hwangu. Vose pfungwa izvi zvakaita kuti ndifunge kuti kuroorana chinhu kuti vaizochengeta ini shure. Zvaiva ndirege kutevera zviroto zvose basa ndakava uye zvimwe zuva Ini aipedzisira pamwe 10 uye hafu vacheche papurazi kumwe.
Zvinofadza, ini kwemakore Jehovha akadzidzisa uye vakandiratidza chii chaizvoizvo sokunge kuva mukadzi aitya Mwari. Kuva mukadzi aitya Mwari havana kunorondedzerwa zvaunoita kana usingaiti. Ndinoziva zvakawanda vakadzi vanotya Mwari vanoshumira Jehovha vakatendeka vari yemakambani basa nevakadzi vakawanda vanoshumira vana vavo uye varume vakatendeka kumba. Biblical womanhood iri pamusoro kunzwisisa kwaMwari rakasiyana nemamwe muchinangwa kwatiri sezvo vakadzi vanofarira kunaka Gods zvakagadzirwa.
Sezvo mukadzi akaroorwa Ndakadzidza zvikuru pamusoro zvazvinoreva kuva vakadzi vanotya Mwari uye handirevi sokuti akasungwa pasi murume wangu kana wangu muchato. magadzirirwo muchato raMwari zvakatinakira uye kubwinya kwake. Kuziva uye vanotenda kuti akandipa chivimbo kuroora pazera 22. Kwapera makore maviri nehafu, Handina kumbozvidemba, uye ndinogona kunyengetera chete kuti Jehovha anoramba achikomborera muchato wedu.
Jdharden1 • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 7:53 ndiri • pindura
Ndizvo zvinoshamisa, sei Mwari anogona kunyora kupfuura akakwana rudo nyaya vaya mumaoko rezvipfuwo kwaari. Ndinokutendai Jessica, Ini chaizvo aida ichi. Izvi kunondikurudzira somunhu 16yr okuberekwa kuzviisa pasi paMwari uye rega atorewo nzira yake murudo rwangu upenyu. Mwari vakukomborere.
Jannon Fitzpatrick • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 7:53 ndiri • pindura
I VANODA IZVI!! Tiri vechidiki vafundisi pane imwe chechi duku uye ndinogara kuudza vari kuyaruka, “Pane zvinhu zviviri chete zvinhu zvichakubatsira kuita muukama… 1) Roora 2) Kuparadzana. Ichipaza kunokuvadza uye pave mukwende, saka kana iwe usiri wagadzirira kuroora, zvakanaka kwete kutanga muukama.” (Kwete kuti urege kukura kuva akagadzirira kuroora muukama, asi ndiri kunyanya kutaura 13-16 Yr vane vana vane makore.) Vanhu vakawanda vanotanga ukama kufunga richava diki, shortlived, mafaro chinhu. Asi zvino kunzwa kuva, iwe chivi, uye zvadaro zviri kupfuura zvaaimboita kubuda. Kana isu aizodzivirira mwoyo Mwari vakatipa sevanokosha, uende nenguva ukama nemaonero ichi, nemaonero kwayo nekuguma kuroorwa murume Godly kana mukadzi, taizova kure zvishoma kurwadziwa uye akaputsa panguva murume Godly kana mukadzi Mwari rwaanarwo kwatiri anouya kumativi! Thanks chokuita!!!
Demonslayer4god777 • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 7:54 ndiri • pindura
Ndinonzwa kufara I rarira pamusoro kubatana kuverenga this post. ndiri 25 uye murume wangu uye ndave ndakaroorwa kwemakore anenge 5 makore. ikozvino, Ndini wokutanga kuudza munhu wose kuti Mwari ndiye chikonzero tiri kuroorwa. Sewe, pa 21, Ndakanga NOT kutsvaga handina kuda murume, Nhungirwa ndaisada mukomana. 2007 akanga gore Mwari akachinja zvachose upenyu hwangu. Muna January Ndainge vawana chii Mwari vaida yaiva ukama pane chitendero saka ndakanga kumusoro(mumudzimu) uye kushingaira kufanana hapana ndakanga ndamboitwa pamberi. chinhu Next ndinozviziva Papera mwedzi ndakanga ndaroora. Crazy Ndinoziva. Asi chii chinogona ndinoti…Mwari akatiudza kuti kuzviita. Uye pashure pemakore mashanu, tichiri pamwe chete, uye kukura pamwechete Kristu. ikozvino, Handidi zano kuti munhu kuzviita nokukurumidza sezvo zvatakaita. Asi handidi zano naro, kana ukanzwa kutungamirirwa naMwari, uye vakanyengeterera uye nokutsanya. Ndinonamata kuti Mwari anoramba kukura kwete chete muchato wako asi kusimbisa nayo. Ndinonamata kuti munodanana rimwewo richikura. I Vanosunga chinhu, anyperson, chero mweya, kuti aedze vagovere iwe. Ndinonyengetererawo kuti iwe vanokomborerwa nokukurukurirana zvikuru unyanzvi, ndikaramba murefu. Ngaarangarire iwe, muna Jesu zita.
Matt Novak • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 7:54 ndiri • pindura
Tinotenda varume kushandisa kudanana kwenyu uye muchato somuenzaniso uye kurudziro yokuti vaduku anosarudza uye vakaroorana vechiduku vakaroorana. Tatenda achikudza Mwari muchato wako, uye kugoverana uchenjeri hwako uye zvakaitika muviri waKristu, riri chokwadi mwenga waKristu, ichi saka anotipa mufananidzo sei tiri kurarama somwenga waKristu. Rumbidzai Mwari basa zvaakaitira hwenyu imi vaviri kukura pane kudaro muduku.
Ariep17 • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 7:54 ndiri • pindura
Wow ichi chaiva chokwadi chikuru! sezvo 20 y.o. ppl tarisa pangu wokwaEfremu seanopenga nokuti ndine chishuwo kuzoroorwa. Ndinoda kuona vamwe kuwedzera pane zvaunoreva kubudikidza “mupfungwa chaiyo.” Ndinoda trasparency uyewo zvamakataura. Mwari ropafadzai yall
Philipns2 5 11 • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 7:55 ndiri • pindura
nyonyova, paanoti “mupfungwa chaiyo” iye kutaura zvakawanda pamusoro usati mupfungwa dzako kuedza kuroora mukomana kana kufunga kuti uri “chete” ake nokuti uri kufambidzana nomumwe. Izvozvo zvingaita kuti vamwe pfungwa dzokutadza akafanana, “Kufungidzira uchiita zvepabonde, ruchiva,etc.” Iwe unoziva uri mupfungwa kuchena kana chiratidzo chako nounhu kuti mumwe munhu zvakadaro zvikanganiswe kuti iwe kuti ukama chifananidzo kwako pfungwa. Ndicho chikonzero Proverbs 4:23 zvakakosha zvikuru kurarama,kunyanya sezvo mukadzi nekuti tiri, kufanana radudzwa, “mupfungwa” zvisikwa.
Ariep17 • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 7:55 ndiri • pindura
Ndine ikozvino kuvonga iwe. Your zvachose zvakanaka. Ini mutsimba kuti. Kuti chete kunounza zvisingakoshi kurwadziwa
Kerai Chirahwe • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 7:56 ndiri • pindura
Ndinoda ichi!!!!!!!!! Dzimwe nguva iwe sokuti kukanganwa kuti youre kwete chete nokuti vazhinji vakakupoteredza zvikurukuru vezera vanofunga yenyu “asvetuka pfuti” vanhu vazhinji saka kwandiri kuti ini wasnt vakagadzirira uye wokwaEfremu muduku, asi Ndinonyatsotenda izvi ndizvo mwari aiva ndakachengeterwa. Ndakanzwa kutya kupenga dzangu zuva pashure nekuti kwete chete handina kuroora mangwanani pazera 18 neniwo akaroorwa nemurume wandaiziva isingasviki gore uye akanga chete 19. Takanga akwirwe pakarepo akaita mweya yedu vakanga vakatondeswa kuva pamwe chete, ndinoda iye zvikuru zvino kupfuura ndikazombova nomuTapanhesi nomumwe wangu upenyu uye ini wouldnt zviite chinhu. Takanyengetera pamwe chete uye vakaenda kuchechi pamwe chete akawana uye aiva mwana pamwe chete zvino pano isu are..It achava 3 makore Kukadzi uye ndichine Handizvidembi kuti ini Akatama :-) mwari akandikomborera munhu akanaka.. My mhiko kureva nyika kwandiri uye ini wouldnt varambane.. Tatenda nokuisa ichi chengeta naro ndinoda wechidiki rudo… Iwe kashoma kuona vakaroorana okupedzisira to rufu asi ndinoedza kuti vaviri the rufu isu kuparadzana kurambana hazviitwi!!
Adrienne Kelly • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 7:57 ndiri • pindura
Mwari vakuropafadzei vaviri. Zvirokwazvo achaita nokuti vakavimba naye uye muurongwa naMwari nokuti munhurume / mukadzi ukama uye akapinda nesungano chibvumirano kuti vagomukudza uye mumwe upenyu. Ndiri vanozvikudza saka.
M.A.R.V. • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 7:57 ndiri • pindura
akaida!! Ay yall Mukadzi-up njere pamusoro romuBhaibheri womanhood vako wifes zvose kuzviitira :)
Louib2001 • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 7:57 ndiri • pindura
Rumbidzai Jehovha imi mukoma uye yakanaka mudzimai wako hwako. Ndinonamata kuti Ishe achadurura nyasha dzose kusvikira kumarudzi enyu upenyu, nekuti wakateerera shoko rake. ndiri 28 uye ndave ndakaroorwa ikozvino kweanenge makore maviri uye ini nemudzimai wangu vafare uye yakanaka 10 chitemamachira mwana akwegura. Ini ndagara kuzoroorwa muduku, asi ndinotenda Yakanga isiri nguva asi ini kusvikira Jehovha akauya yangu chinhu chakanaka chinenge 5 makore apfuura (kuva namazvo takaonana musi patakaroorana patsva 31 Dec 2006). Handina tinoziva kupi zvinofanira kuva pamwe chete ndamutora ive hanzvadzi munhuwo kubva kuchechi. Ndainge vonyanya yangu mune zvokunamata, asi makore matatu apfuura meso angu akasvinudzwa uye vamwe sezvo vachiti ndiyo nhoroondo.
Zviri yaSatani zvakarongwa kuti vanhu varege kuva kuroorwa, kuti vararame chivi uye isu kare kuziva zvichaitika. Hatina akatarira mwero kurambana mumuviri nhasi? Sei pamusoro hama nehanzvadzi fornicating mukereke, nokuti chii vanhu pauri.
Kana tikatarisa sei pamaguta edu akazara youth mhirizhonga nhasi, Tinoita tora kanguva kufunga nezvezvimwe zvinokonzera? Nhambo murume Exchange Godly tsika kuti dzeraundi ism zvose izvi vakawira vega. Kunyange vabereki vechiKristu vari nokusaziva kukurudzira dzeraundi ism nokuda kurambidza vana vavo varege kuroorwa muduku (pazera hanya pachena). Zvikonzero zviri I kudzokorora”unofanira kuwana dzidzo, zvichida kana wapedza vatenzi venyu uye vane vakadzikama basa, zvadaro chitanga kufunga nezvokuroorana”. Kuti kurira akachenjera handitika ? Saka chii chinoitika apo mwana wako wechiKristu anoenda yunivhesiti obva zvinopfakanyika pamwe mukomana / musikana shamwari ane kana Christian kana asiri?
Ndapota regai vandibate zvakaipa(kuti zvimwe zvinhu Ndauya nepakati), nekuti pamusoro apa hairevi zvose. Dzidzo kunokosha chaizvo somunhu anowana zivo pamusoro dzazvinogara basa ravo saka vaikwanisa kushanda uye kuriritira mhuri dzavo ramangwana nezvimwewo, asi muchato wont kumisa mumwe kubva kubudirira chii nokusingaperi nharaunda muupenyu munhu anosarudza kutevera, sezvo Chokwadi muchato zvavo kunosimudzira kukura i.e ushumiri zvikuru, zvakanaka Heath, upfumi uye mazita anopfuurira. Yeuka vaviri vachava nyama imwe uye anogona vatize 10 000 Wow, zvinoreva kuti pane chibvumirano chii nokusingaperi vanokumbira Mwari vakatendeka vachaita pakuva, zvikuru…..
In pedyo Ndinoda pfungwa kuti isu sevaKristu kutanga kudzidzisa vana vedu vachiri vaduku pamusoro kukosha mupenyu wokutanga Mwari uye chechipiri kukosha muchato( kune vaya wapihwa chipo) saka vakura vaida kufadza Mwari munzvimbo iyi. Kamwe zvakare wakaita munin'ina wangu zvakanaka uye vose vaigara shoko raMwari. Stay wakakomborerwa.
Iwantstate01 • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 7:58 ndiri • pindura
Jessica, unogona kugoverana zvimwe zvinhu Trip sei panguva yokudanana wako kurinda mwoyo wako mupfungwa. Ndinonzwisisa kuisa panyama kuchena miganhu. Asi chii chakaita izvozvo kutarira akafanana Munenge munzvimbo mupfungwa?
Purposedrivenjc • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 7:58 ndiri • pindura
ichi yakandipa maonero matsva muwanano, kuvonga Masvinga
Kory Hagler • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 7:58 ndiri • pindura
moyo wangu anokurudzirwa zvechokwadi, zvachose yakanaka
Robert Rivera • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 7:59 ndiri • pindura
Runako!! Mwari vakuropafadzei vakomana!! chaizvo…
Punchyko • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 7:59 ndiri • pindura
Wow!!! zvinhu zvakanaka, kuvonga chaizvo nokuisa Blog ichi! nyasha&rugare 0 =)
Katherine2c • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 7:59 ndiri • pindura
I saka VAIFANIRA kuverenga izvi!!! Ndatenda!! Ini kunditambudza zvinhu imi kamwe mutsimba uye ndinoda kukudza Jehovha nomurume wangu!!!! With kuti zviri kutaurwa, Ini vacharamba kuedza kuva P31 mukadzi!!! Wazviita!!!
Paul WenChih Anibal • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 7:59 ndiri • pindura
Chinhu chakakodzera kuita zvinokosha kuita nani ane synergistic naye. … saka tinonyora: http://mentoringmarriages.word…
Tinotenda kuti nyaya yako.
ChosenV • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 8:00 ndiri • pindura
Zvamazvirokwazvo, ndinotenda Mwari kuti Blog wako. Aaverenga nokuda 1st nguva ndakanga wow'd pa Gods basa. Mitatu pasi mutsetse Ndaiverenga ichi zvakare uye Ndichiri wow'd. Ndiri 22 egore hadzi uye marraige “chikuru”, Blog wako trully kurudziro. Munamato wangu kuti murume wangu ave Mwari inopepereswa sezvo Trip akanga tichitarisa basa rake somunhu ari ukama hwedu. Mwari vakuropafadzei:-)
Chelster • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 8:00 ndiri • pindura
At Man Up, THE, vakaroorana ago, Jess kutaurwa kuti Trip kwake “chokufuka,” uye pano iye akataura sei aishandisa kuva “Unofanira Kuva Nyanzvi Chaiyo,” asi vakauya kudzidza kuzvipira chii (teerera) romukadzi zvinofanirwa kutarira kufanana.
Vanogona kana kana vaviri uchitaura zvishoma zvakananga pane zvaunotenda pfungwa kwaMwari kuti mabasa evanhu uye vakadzi mumba? Y'all chikomborero!!
Nicole Rose Munhawa • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 8:00 ndiri • pindura
I here kufunga nyaya yako anoshamisa. Vaviri iwe nokuenzanisa runako chipo chokuroorana uye unofanira akafuridzirwa ini here. Makorokoto muchato wenyu uye ndinonyengeterera kuti chinonyadzisa rudo kugoveranwa pakati penyu. Saka kufara nokuti imi
Kayla_brown_1 • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 8:00 ndiri • pindura
nei pum ndinowana kuti :(
Godgiven51 • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 8:01 ndiri • pindura
akachenjera maonero akadaro,Ini nomudzimai wangu tave varoorana 5 makore ndiri muvhangeri hip munda,ayo rinotyisa kuti naye mukona achinyengetera kana tichifamba nguva dzose,imi vakadzi kutamba chikamu chinokosha muupenyu hwedu,rambai kuita Yekushandisa doin hanzvadzi!
Iolene_Branch • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 8:01 ndiri • pindura
Ndaisa pachangu parwendo kuva mukadzi nani waKristu pamavambo 2011 uye ndinofanira kutaura Ndauya kure chaizvo nzira imwe uye ndiri zvikuru kudada pachangu. Munguva rwendo rwangu Mwari akaisa wakaropafadzwa munhu nzira yangu uye kuverenga Blog ino zvachose wakapata wayo chikamu sezvo yokupedzisira chiratidzo chinodiwa kubva paminyengetero yangu.
Neniwo ndisina zvinovavarirwa kutsvaka munhu kupedza kwoupenyu hwangu pamwe pane 20 zera, asi pano ndiri, uye Blog iri zvinokurudzira chaizvo. Nokuti ini kumira parutivi kwaari zvose zvaaiita uye ave mukadzi Mwari akasika ini kuti uve parutivi rwake sezvo Mwari Inotibatsira kuti ave munhu anofanira kuva.
Ndinokutendai nokuti ichi. I zvechokwadi anzwisisa :)
Arnold Mofor • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 8:01 ndiri • pindura
Whao, Trip uye Jessica! Iwe chaizvoizvo havazivi kuti kure zvidzidzo zvako kusvika-Ndiri Cameroon. ndiri 25 Yr-okuberekwa uye achangobva akatora pazuva dzimwe nguva Mwari kutsvaka Mwari pamusoro shamwari yangu ramangwana. Ndakabva vaikwira zvinenge / Munyengetero pfungwa mazita worudzii mukadzi Ndinoda kufambidzana uye pakupedzisira kuroorwa. Ipapo zuva kwapera ndakasangana Blog renyu. Ndinofunga Mwari ari kugadzirira neni chaiyo nzira. Ichi Wife wangu kuongorora / munamato pfungwa nyora:
Arnold mudzimai kuongorora / MUNYENGETERO PFUNGWA LIST
Vakazvipira uye kuwedzera kwechiKristu
My dzakakodzera Munyaradzi
Anoremekedza vabereki vake, nemhuri yake, simba uye ini pamberi pangu uye kusavapo
Partners neni muushumiri hwangu
Kuzviisa pasi muzvinhu zvose
Ane munyoro wakanyarara Spirit
Mugove zvakafanana pfungwa, nokutamburira, marwadzo, hapana zvakavanzika
Hapana waanoda rwekunze-mbatya, chishongo, bvudzi kuno-
Akangwara uye Zvikuru
Anondivatisa vanoda kushanda chaizvo nesimba
Angela Johnson • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 8:01 ndiri • pindura
Chokwadi Blessing You Both Uri! Ramba Kufambirana naye! Muchava asina Enda Wrong…..Ever! Ndakaroorana muduku asi pasina uchenjeri KWAARI nevamwe vakatungamirirwa neMweya kuti anotikurudzira kuti vamutsvake kutanga……Ndinofanira kutaura kuti munhu anosarudza Way RAKE chichange Positioning pavo muchizvinyengera kugamuchira Plan WAKE navo uye kwete zvirongwa zvavo pachavo iri kupfuura Chinhu zvataigona nokusingaperi “funga” nokuti isu….VIMBA NAYE!:) Ndiri kufamba Nokutenda uye kwete Nokuona (2 VaKorinde 5:7) Kana ndingadai ndakuuraya zvangu kuzvida……Pasina KWAARI ndakaona hapana chinhu chakanaka. Maita Jehovha For Kutuma The Mutsvene anonyaradza uye anonditsanangurira. Jesu ndiShe! ( Ndichiri akaroora uye isu Both <3 Ishe!) Stay Blessed!:) zvikuru <3 uye Peace!:) Very Inspiring muri vaviri kuti neawakatumirwa, Ndokutenda zvikuru!:)
aneetarh • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 8:03 ndiri • pindura
tenda a zvikuru Jessica,Zvanzi chaizvo wot Zvandinoda zvakanaka NW. Mwari rilly bls nepfambi vakomana. Ndiri 21, ari relatnshp wokuzvipira N mukomana wangu anoda 2 kuroorwa ASAP. Handina chokwadi kana ari Gud pfungwa chikonzero Ndainzwa sokuti haana yakura enuf: bt Ndinotenda Mwari 4 Zvanzi,kana chiri kuda kwaMwari the Ini nokunyora magwaro zvachose 2 naro
Rchllnndreher • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 8:03 ndiri • pindura
WOW zvikonzero shure iwe kuwana marride vakafanana wangu vaiva uye chii zvichiri kundiita kutenda ndakaita chisarudzo chakarurama Ndaifungawo Mwari vachiti uyu ndiye inguva kurega kare chete mufundisi wedu didnt mugogona izvo zvakaita kusarudza zvakaoma nenzira imwe pane ndakanga kutevera Mwari. ndiri 22 uye kuroora 2 mo, kare. Zvingava pfupi nguva asi Mwari ari kukura isu pamwe chete uye kutidzidzisa zvikuru(nokuti ini sei kuti kuvhura kuva nyoro uye uve mukadzi semasikirwo Mwari kuti ndive) Zvakanga awsome kuverenga ichi uye ndinoda kukutendai nokutora nguva kunyora nayo. Mwari vakuropafadzei uye Your House!
Rachel Wright • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 8:03 ndiri • pindura
uchapupu Ya'll rinotyisa saka! Zvinonzi Zvinokurudzira kunzwa kuti ya'll vaigona kuroorwa muduku. Ini ndiri kuchata chirimo ichi pazera 21 wedu uye Mwari akaropafadza munzira dzakawanda uye anoramba isu katyamadza uye achatikomborera! Ndinokutendai zvakare kubva vaviri newe inokurudzira vanyora izvi!
Dfletcher812 • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 8:03 ndiri • pindura
I Totally Bvumiranai. Ndakaroorana pazera 18. Hongu ndiri mwana asi, Jehovha akataura neni uye vakandiudza usatya kutora achikwakuka kutenda uye kuteerera kwaMwari Handina. Now Im 24 pamwe Vatatu Kids uye yangu Murume Ini yakadzika kwazvo muushumiri mimhanzi. Mwari akaita zvimwe zvisingaiti zvinhu muupenyu hwedu uye ndinoda kunzwa kuti vamwe vakadzi vechiduku uye majaya Mwari vanoziva kuti Mwari akapa wavo mweya naye kwavari uye deiced kusarudza zvakanaka.
Uye isu pum kukanganwa, Mariya akaroorwa naJosefa pa 14 makore Birthed Jesu, Aiva mhandara uye yakachena pamberi paMwari. Saka Ladies vanhu varambe vakachena kuna Mwari kusvikira nepfambi kuroorwa!!!
Grabiel Rivera • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 8:04 ndiri • pindura
Ndiko kukuru chete chaitika kwandiri uye mukadzi wangu , ndanga 21 uye iye akanga 18. tikarega mwari anotirayira uye kuva muwanano yedu uye ikozvino achiratidza nesu iye basa rake lifes edu uye muwanano yedu. mwari anogona kuchengeta chikomborero yah muchato zvaakaitira wakafanana mwari needu kuropafadza
Addis Hunter • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 8:04 ndiri • pindura
Ndinokutendai nokuti uchapupu hwako, Ndinogona kurondedzera kwauri munzira dzakawanda. Ini kubvuma kuti I zvakaoma zuva nezuva “vane mweya munyoro wakanyarara” chikamu marrige..Like iwe, Ndakanga uye ndichiri ndiri nemhepo chaizvo uye independant , uye kubvuma murume wangu somusoro wemba uye pasi pfungwa dzake (kunyange kana I dont kubvumirana) ndiye dambudziko rangu guru somudzimai wechiduku. Ndinobvunza Mwari mazuva ose kuti andibatsire kuzvininipisa ndoga uye submitt kuti murume wangu nenzira dzose. Ndinokutendai nokuti kugoverana.
wokuKurini Hudson • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 8:04 ndiri • pindura
Imi varume muri Zvaifadza chikomborero rakadai vaduku vatendi! Ndinoda maviri Blogs izvi uye tenda Jehovha zvose iye akataura neni kuburikidza imi vaviri!
Jennifer Ann Mutengesi • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 8:05 ndiri • pindura
21 zera, uye ndinonzwa sokuti uri neni achirondedzera. Ini chokwadi vane kuti Unofanira Kuva Nyanzvi Chaiyo Syndrome. Ndinokutendai zvikuru zvinotyisa uchapupu hwako, Zvinondifadza tariro :)
Orinthea McKenzie • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 8:05 ndiri • pindura
Ndiri zvikuru uchapupu ichi. Mwari ngaakomborere wako mubatanidzwa
Pulemolise • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 8:05 ndiri • pindura
thnx alot Trip uye Jessica,vakuru vakawanda Nid 2 ona Zvanzi,M zvechokwadi akakurudzirwa imi vakomana,I luv HW muUri mativi mukwanisi,-Trip akasangana mukadzi aitya Mwari uye Jessica akasangana murume aitya Mwari,Wow!(dats nei a anazvo 2 roora,lol!) nd it isu thnk Mwari 4 U vakomana,Akatarira hv kuratidzwa dat nepfambi anogona akumaJuda mutoro vakura pane muduku wakange vakuru ava mukuru pazera pum evn kutarisira chikamu Wat U R kuita,makuru kupota 2 mu,nd it Mwari arambe 2 kaitwa Ur muchato zvakawanda nomumwe zuva DT rinouya
House Ewansiha • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 8:06 ndiri • pindura
akamuka mafungiro angu pamusoro zvakawanda
Simon Pauro ----- UK • Mbudzi 9, 2013 pa 5:55 pm • pindura
Ndinokutendai a zvikuru Jessica nokuda apowerful kurudziro yakadaro .Am 21 asi ini alwalys vakafunga kukura zvinoreva nezvemuchato ukama .Sorry kuti atarisire iwe, Anoita kudanana mumwe muKristu ukama meanyou kunge kuroorwa kuti chaizvo munhu , kunyange iye ane ose hwepedyo muUri akatarisa for..n iwe dont Wanna kundikuvadza person..cos iye anotarisira uto ave hubby wake …Sei kuti a kubata njodzi yakadaro?????thxx.
Kaila • Mbudzi 14, 2013 pa 9:36 pm • pindura
Ndinoziva izvi zvakanyorwa pechinguvana kare uye ini pakupedzisira mukana kuriverenga. asi, Ndinofunga izvi yaiva nguva yakanaka kwandiri kuriverenga. Sokunge Mwari anoramba kuisa zvinhu zvishoma kumativi kuti ndiudze inguva kumuisa kunyika zvinhu. Uye ndinofunga kwete chete ukama hwangu nemukomana wangu chii kuti inoda Naye shure mairi, asi ichi chinoratidza kuti iye anogona kubatsira zvinhu wakatsetseka kunze.
Ndakaonawo zvichifadza kuti handina kumbobvira ndazvifunga Mindset yangu sezvo Superwomen Syndrome, asi handigoni chokwadi kutaura zvandinoda kubatsira kushanda zvangu. Ndizvo mukomana wangu rinotsanangura ini kana Ndinoedza kuita rakawandisa kana mupfungwa kana kushanda vakachenjera.
Colton • Kukadzi 10, 2014 pa 5:00 pm • pindura
Hey Trip! Ndakaverenga zvose vanyora izvi, uye ivo (pamwe zano hwaMwari mhuri uye shamwari) zvave chaizvo zvinobatsira kwandiri kare mishoma. Ini ndakakunda akasangana musikana kuti ndinoziva Mwari ane kwandiri kuroorwa, uye isu tiri chete tichimirira nguva yake. Zviri ingangodaro isu achaguma akaroorwa kunyange usati vaiva, kana panguva iyoyo!
Ndeapi mazano aungapa munhu ari wose imwe nzira vagadzirira kuroorwa, kunze kukwanisa kupa musha (nokuti kukoreji)?
Nadene • Chivabvu 24, 2014 pa 5:38 pm • pindura
Izvi zvakanga wakanaka. Havagoni kutaura sei zvikuru ndaida ichi :'). Mwari akatendeka zvechokwadi!
Myles • Gunyana 4, 2014 pa 4:52 pm • pindura
Thanks Jessica akanga Gods chokwadi ndaifanira kunzwa!
Femi • Kukadzi 21, 2015 pa 1:34 pm • pindura
Tinotenda kuti kugoverana Jessica. izvi zvirokwazvo achinja yangu maonero pamusoro kufambidzana; kwete kuti kumutsa rudo asati nguva yaro. dope!
Lily • Chikumi 11, 2017 pa 12:47 ndiri • pindura
Ndinokutendai kugoverana ruzivo rwako uye uchenjeri panyaya. Kuverenga izvi kwakandibatsira kupfuura imi munoziva.